Andrographis Paniculata nalaina
Fitrandrahana akondro kanelina
Ny citrus aurantium (Citrus aurantium L.) dia nalaina avy tamin'ny citrus aurantium. Citrus aurantium, zavamaniry misy fianakaviana rue, dia miparitaka be any Sina. Amin'ny fitsaboana sinoa nentim-paharazana dia ahitra nentim-paharazana nentina nampitomboana ny fahazotoan-komana sy mifehy ny qi (angovo). Ny akora mavitrika dia hesperidin ary vovoka mavo mavo mavo izy io ary misy fofona kely. Azo levona kely amin'ny methanol sy asidra acétat glacial mafana, saika tsy vonoina amin'ny acétone, benzene ary chloroform, fa mora levona amin'ny alkali sy pyridine maloto. Hesperidin dia ampiasaina amin'ny indostrian'ny sakafo ho toy ny antioxidant voajanahary ary azo ampiasaina amin'ny indostrian'ny tarehy koa.
Loharano: Citrus aurantium L.
Ampahany ampiasaina: voankazo tanora maina
Fisehoana: vovoka mavo maivana
Famoronana simika: Hesperidin
Milanja molekular: 610.55
Famaritana famatsiana: 10% -95%
1.Hesperidin dia misy oksizena manohitra lipidida, radikaly afaka oksizenina manala, anti-inflammatoire, antiviral, effets antibacterial, fampiasana maharitra dia mety hanemotra ny fahanterana sy ny anti-cancer.
2.Hesperidin dia manana ny fitazomana ny tsindry osmotic, ny fanamafisana ny hamafin'ny capillary, ny fanafohezana ny fotoana mandeha rà sy ny fampihenana ny kolesterola, sns., Ary ampiasaina ho toy ny fitsaboana adjuvant ho an'ny aretin'ny rafi-pitabatabana amin'ny fampiharana klinika.
3. Vokatry ny anti-inflammatoire sy anti-cancer. Manamaivana ny tsy fahazakana sy ny tazo amin'ny fanakanana ny famokarana histamine ao anaty ra.
4. Mampiroborobo amin'ny fomba mahomby ny tanjaka sy ny elastika amin'ny rindrin'ny lalan-dra. Izy io koa dia manampy amin'ny fampihenana ny fihenan'ny vaskola mifandraika amin'ny aretin'aty, ny fahanterana ary ny tsy fanatanjahan-tena.
Teo aloha: Sophora Japonica Extract
Manaraka: Tongkat Ali Extract
Hesperidine amin'ny fotony maina
Fofona sy tsiro
Visual & tsiro
100% amin'ny alàlan'ny 80 metatra
Bobongolo & masirasira
Vokatra fikarakarana ara-pahasalamana, famenon-tsakafo, kosmetika
Sitrana Aurantium mitrandraka citrus
Fitrandrahana herinaratra namboarina
Synephrine fitrandrahana ny citrus Aurantium